आईतबार, मंसिर १४, २०७७ सारङ्गी न्युज
सजकता अपनाउँदा अपनाउँदै हाम्रो स-परिवार काेराेना भाइरस (कोभिड–१९) बाट संक्रमित हुन पुग्यौ । हामी घरमा होस् या क्लिनिकमा सक्दाे सजगता अपनाएका पनि थियाैँ । जसका लागि घरबाहिर हिड्दा हाेस् या क्लिनिकमा अनिवार्य मास्क, सेनिटाइजर र साबुन पानीले हात धुनेनियमित जस्तै थियाे । कुनै कार्यक्रम वा भीडभाडमा सहभागी भएर घर फर्के पछि नुहाएर मात्र कोठामा प्रवेश गर्नुपर्ने नियम अबलम्वन गरेका थियाैँ ।
हाम्रो परिवारमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सरसफाईका सबै नियमहरू सजगताका साथ लागु गरेका थियौँ । तर जे नहुनु पर्थ्याे त्यहीँ भयाे । शुरूमा मलाई सामान्य रूघाखाेकी देखा पर्याे । मैले यसलाई चिसाे वा धुलाेधुवाँका कारण सिजनल रूघाखाेकी हाेला भनेर सामान्य रूपमा लिएता पनि म सेल्फ हाेम क्वारेन्टाइनमा बसे तर अर्काे दिन ज्वराे देखा पर्याे, शरिर कम्जाेरी भए झै महसुस भयाे अनि त्यस पछि संङ्का लाग्याे, कतै काेराेना त हाेईन ?
अर्काे दिन बिहान पिसीअार चेक गर्न राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गएर परिक्षणका लागि स्वाव दिए । शुक्रबारको दिन थियो । आइतबार रिपोर्ट आउँछ भन्ने कुरा गर्नु भयाे ।
कोरोनाका लक्षणसँग केही लक्षण मिल्दोजुल्दो रहेको हुँदा संक्रमण हुन सक्ने संङ्कामा थिए म । तर संयाेगले भाेलीपल्ट शनिबारका दिन बेलुका रिपोर्ट अाएकाे कुरा थाहा भयाे, जुन मेराे रिपोर्ट पाेजिटिभ थियाे । आफैं स्वास्थ्यकर्मी भए पनि केही लक्षण सहित संक्रमण पुष्टि भएकाले म भने थोरै आत्तिएता पनि केहि पुर्व तयारीका साथ मन बलियाे र धैर्यताका साथ घाेराही उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य संयाेजक नारायणप्रसाद घर्तीज्युको सल्लाहमा हाेम आइसोलेशनमा बस्ने निधो गरे । बाबु र मेडम सेल्फ हाेम क्वारेन्टाइन मै थिए ।
मलाई रूघाखाेकी लागेकाे दिन देखी म, छाेरा र श्रीमती भाैतिक दुरी कायम गर्दै सेल्फ हाेम क्वारेन्टाइनमा बसेका थियाै । जव मेराे रिपोर्ट पाेजिटिभ अायाे, त्यतिबेला सम्म मेडमलाई घाँटी दुख्ने, रूघाँखाेकी लाग्ने जस्ता लक्षण देखा परेका थिए । तर बाबुमा कुनै लक्षण थिएन । सामान्य थिए । तै पनि परिस्थिति अनुसार मेडम र बाबुको पि सि आर रिपोर्टका लागि स्वाब दिने निधो गर्यौ । आइतबार बिहान स्वाव दिन बाबु र मेडम राप्ती स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा गए । स्वाब दिएर फर्किए । साेमवार साँझ रिपोर्ट अायाे जाे दुबै रिपोर्ट पाेजिटीभ थियाे याे सुन्दा मलाई अलि नमजा लाग्याे भित्रि मन रूयाे । तर जे भएनि अाफु मन दरिलो बनाएर बाबु र मेडमलाई सान्त्वना दिदै रिपोर्ट पाेजिटीभ अाएकाे कुराे सुनाए । तर बाबुकाे रिपोर्ट नेगेटिभ हुन्छ कि भन्नेमा अलि बढी अाशावादी थियाैँ, त्यसाे हुन सकेन । अाफुलाई भन्दा पनि मेडम र बाबुमा काेराेना संक्रमण पाेजिटीभ भएकाेमा दु:ख लाग्याे । तर मेडम र बाबुलाई कुनै कुरोले असर नगरोस् भन्नेमा म सजक थिए ।
पहिले म एक्लै संक्रमित थिए त पछि घरमा मेडम र बाबु पनि संक्रमित भएको पुष्टी भएपछि आफु अभिभावकका रूपमा उनिहरुको हेरचाह नि गर्नु पर्ने बाध्यता आईलाग्यो । कुनैबेला हामीमा केहि समस्या आउँछ, कि भन्ने भित्री मनमा सताउथ्याे । त्यसका लागि बाँफ लिन निमुलाईजर, अक्सिजन र पल्ल नाप्न पल्स अक्सिमिटर, ज्वराे एवम् प्रेसर नाप्न थर्मामिटर र बिपि सेट आफुसँगै राखेका थियौँ। समय-समयमा सबैकाे अक्सिजन, पल्स नापी रहनथ्याैँ । अावश्यकता अनुसार ज्वराे वा प्रेसर नाप्ने गर्थियौँ । अक्सिजन अावश्यकता पर्छ कि भनि स्ट्यानबाई राखेका थियाैँ ।
शरिर दुखाई, कमजोरीले टाउको दुख्थ्याे । केही खान मन नलागे पनि जवर्जती खान्थ्याैँ । शरीर पूरै गलेको थियो । स्वाद र गन्ध केही महसुस गर्न सकेका थिएनाैँ । कहिलेकाँही अस्पताल पुग्नुपर्ने अवस्था अाउँछ कि भन्ने डर मनमा भई रहन्थ्याे । तर भगवानकाे कृपाले त्याे अवस्था अाएन । त्याे समयमा जे जति गर्याैँ दैनिक सन्तुलित भाेजन नै हाम्रो सुधारकाे अाेखती बन्यो । यसरी दिनहरू बित्दै गए ।
हामीले आयुर्वेदिक इमिनाे केयर र अशाेका गन्ध चुर्ण, चेवनप्रास र घरेलु अाैषधीहरुमा कुनै कमी हुन दिएनाैँ । सबै घरेलु औषधी उपचार र खानपिनको व्यवस्था सके जति मिलाएका थियौ । एलोपेथिक अाैषधीमा निको, अजिथ्रो, कफ सिरप, सिटिजेट, मल्टि भिटामिन, भिटामिन सि, क्याल्सियम जस्ता अतिअावश्यक अाैषधी अाबश्यकता अनुसार प्रयोग गरेका थियौ । दिनमा ३ पटक वाफ लिईन्थ्याैँ । शारीरिक ब्यायामलाई पनि उत्तिकै निर्णतरता दियाैँ । अक्सिजनको लेवल ६/६ घण्टामा छोरा अभिनयले नाप्ने गर्थे । हामीलाई शारीरिक समस्या ७ देखि ११ दिन सम्म अलि बढी भयो । याे अबधिमा कसलाई के हुने हो, भन्ने त्रासले पनि हामी ५ दिनसम्मकाे त्याे साँझ कोही पनि राम्रोसँग निदाएनौँ । तर त्यो भन्दा कैयौ गुणा बढी मानसिक त्रासले सताउँदो रहेछ ।
हामी स-परिवार अाइसाेलेशनमा हुदै गर्दा हामीलाई काेशेली पुर्याउने माईली माईजु पार्वता, अन्टी राधा, सासुअामा, जेठानी दिदी शुशिला, दिदीसासु यशाेदा, बहिनीहरू रेखा, कल्पना , छरछिमेक, अाफन्तहरू तथा अामाले सल्यानबाट भाइ रमनसँग पठाई दिनु भएका काेशेली समेत हाम्रा लागि औषधी थिए, भने बुवाले हामी सबै अाइसाेलेशनमा भएकाले अार्थिक अप्ठ्यारो पर्छ कि भनेर रूपैया पठाई दिनु भएछ । यो अवधिमा मामा कमलमणि देबकाेटा, ज्वाईहरू तेजकिरण गाैतम र कैलाश अाचार्य, जेठान घनश्याम धिताल, भाईहरू भरत, रमन, छिमेकीहरू बासुदेब गाैतम, हरिप्रसाद पान्डेय, इन्द्रमणि आचार्य र मेराे शुभचिन्तक अात्मिय भाइ मुकेश शर्माको सहयोग अतुलनीय एवम् अविस्मरणीय छ ।
आफू भर्खरै संक्रमण मुक्त भएका मित्र तिलक रावत, बसन्त खनाल,भान्दाजी मनाेहर लामिछाने र सेल्फ हाेम क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएका दाजी निशान्त अाचार्यको सल्लाह सुझावले पनि हामीलाई थप हौसला प्रदान गर्याे । हामीलाई घरमै अाउनु भै भेटेर वा फाेन तथा फेसबुक म्यासेन्जर मार्फत हाैसला प्रदान गर्ने अभिभावक, सम्पूर्ण ईष्टमित्र, साथिभाई तथा छरछिमेक सबैमा हार्दिक अाभार एवम् कृतज्ञता ब्यक्त गर्दछाैँ ।
याे समयमा कतिपयले घरमै अाएर त कतिपयले फाेनबाटै हाैसला दिदै आवश्यक सामग्री अभाब भए पुर्याउने वचन दिनुभयो । कतिले त अाफै फलफुल, दैनिक उपभाेग्य बस्तु लिएर हामीलाई हाैसला दिन घरमै अाउनु भयाे । कुनै अप्ठ्यारो परे फाेन गर्न भन्नु भयाे । यी सबै नै हाम्रा लागि औषधी बने । कतिपय साथिभाइ, इष्ट मित्र तथा सुभचिन्तकहरूका फाेन रिसिभ गर्न सकिएन,यसकालागि क्षमा चाहान्छाैँ ।
काेराेना भाइरस अर्थात काेभिड १९ सुन्दा र पढ्दा जति सामान्य लाग्छ, त्यो भन्दा कैयौँ गुणा शारीरिक र मानसिक पीडा हुँदोरहेछ । त्यसैले कोरोनालाई सामान्य नसम्झाैँ र नबुझाैँ। रुघाखोकी मात्रै हो भनी सामान्य लियाैँ भने यसले ज्यान पनि लिन सक्छ । त्यसैले सबै कोभिड–१९ देखि सचेत बनौँ, सजग रहौँ, शंका लागेमा समयमै पिसिआर जाँच गरौँ । पिसिआर रिपोर्ट अनुसार आफूलाई सुरक्षित राखौँ, अरुलाई राेग सर्नबाट बचाँऊ । हामी आइसोलेशनमा बसेनौँ, पिसिआर गरेनौँ भन्नेहरूसँग सावधान रहाैँ । त्यसैले काेराेना भाइरस अर्थात कोभिड–१९ सँग खेलवाड नगरौँ, सचेत बनौँ, सुरक्षित रहौँ ।
यत्तिबेला हाम्रा सबै अग्रजहरुको आशीर्वाद, ईष्टमित्र तथा छरछिमेककाे माया प्रेम, साथी/संगिहरुको आत्मीयता, हौसला, भाइबहिनीहरूकाे प्रार्थना, भगवानकाे कृपाले हामी सबैको स्वास्थ्य अवस्था सहज बन्दै गयाे । सबैजनाको स्नेह, सहयोग यस अवस्थामा अविस्मरणीय रह्यो र सोही कारण अाज आत्मबलले कोराना भाइरस अर्थात काेविड १९ लाई २१ दिनको होम आइसोलेशनबाट जित्न सफल भई विजय प्राप्ति गयौँ ।
- समीर परिवार/ घाेराही-१७, दाङ ।
आईतबार, मंसिर १४, २०७७, २३:४५:००
#कोरोनाबाट कसरी बच्ने ? #सारङ्गी